Ganacsatada Jubbaland oo ka hadlay khasaaraha ka dhashay xayiraaddii ay dowladda saartay Kismaayo - BBC News Somali
Ganacsatada Jubbaland oo ka hadlay khasaaraha ka dhashay xayiraaddii ay dowladda saartay Kismaayo
Xigashada Sawirka, Shaafi Raabi
Rugta ganacsiga ee maamul goboleedka Jubaland ayaa soo bandhigay khasaaraha ka dhashay xayiraaddii dhanka duulimaadkayada tooska ah ee ay dowladda federaalka ee Soomaaliya kusoo rogtay Jubbaland.
Xog-hayaha Rugta ganacsiga Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Rugta ganacsiga iyo Warshadaha Jubbaland, Shaafi Raabi Kaahin, oo la halay BBC-da ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen khasaraha ka dhashay xayiraadas, oo uu sheegay in ay saameysay dhincayada kala duwan ee mehradaha ganacsiga oo ay ka mid yihiin dukaamada lagu iibiyo qalabka korontada ku shaqeeya, shirkdaha diyaaradaha, ganacsiga quutur daruuriga, isbitaallada, huteellada, waxbarashada, warshadaha yaryar iyo waliba makhaayadaha.
Shaafi ayaa sheegay in ay diiwaangeliyeen 120 xarumood oo ganacsi, oo labaatan kamid ah ay yihiin xarumo caafimaad.
"Qof walba tabartiisa ayuu khasaaray, tusaale ahaan huteellada bishii soo xareyn jiray 30 kun oo doolar, waxay na tuseen in ay soo xareyeen intaas barkeeda, waxayna arrintan aad u saameysay isbitaallada oo waxaan tagnay isbitaallo shaqada ka eryay shaqaalihii, dadkaas na waxaa ku hoos noolaa dad kale oo arrintaa ay saameysay", ayuu yidhi Shaafi Raabi.
Huteelada ayuu sheegay in inta badan sariiraha ay bannaan yihiin, dad lagu qiyaasay shan kun oo Soomaali ahna ay saameysya xayiraadaas. Sidoo kale diyaaradihii tooska ahaa ee ka iman jiray Magaalada Nairobi ayuu sheegay in xayiraadda ay si gaar ah u saameysay.
Khasaaraha guud ayuu ku tilmaamay in uu gaarayo boqolkiiba konton dakhligii soo geli jiray ganacsatada.
"Qiimeyn ayaannu sameynay, oo xitaa huteellada waxay na tuseen in sariiraha ay cidlo yihiin", ayuu yidhi.
Mid kamid ah shirkadaha diyaradaha ee isaga kala gooshi jiray magaalooyinka Dhoobley iyo Kismayo ayaa joojisay howlihii duulimaadka, taas na waxay sababtay in shaqaalihii ka shaqeyn jiray shirakadaas ay shaqo la'aan noqdaan, sida uu sheegay Shaafi..
Wuxuu intaas ku daray in sidoo kale dawooyinkii laga keeni jiray Nairobi uu hakad ku yimid, saameynna ay ku yeelatay bukannada jiifa isbitaalada Magaalada Kismayo.
Khilaafka Jubbaland iyo Dowladda dhexe
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa amar ku bixisay in dhammaan diyaaradihii tagi jiray ama ka bixi jiray magaalada Kismaayo ay sii maraan ama soo maraan garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde, oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
Arrintaas ayey dad badan u arkayeen mid salka ku heysay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland.
Xiisadda labada dhinac ayaa cirka isku sii shareertay ka dib markii Jubbaland ay ka dhacday doorasho ay natiijadeeda qaaddacday wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka.
Waxay wasaaraddu doorashadaas ku tilmaantay mid aan waafaqsaneyn dastuurka qaranka, inkastoo mas'uuliyiinta Jubbaland ay dhankooda ku adkeysteen inaysan wax meel ka dhac ah ku sameynin dastuurka federaalka iyo kan maamul goboleedka toona.